Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Midnimo Dhagaxlay oo Qabsoomay & Mas’uuliyiin Kasoo Qaybgashay.
Shirkii Faraca Midnimo Dhagaxlay oo Qabsoomay & Mas’uuliyiin Kasoo Qaybgashay.
Maanta oo Axad ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 29/10/17 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab kaqabsoomay shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen intabadan xubnaha Faraca Midnimo iyo waliba mas’uuliyiin kasocday Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO.
Kulanka ayaa furmay abaare 2:30 duhurnimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo aad uqiimo badan.
Intaas kadib waxaa xubnaha loo akhriyay wararkii ugu dambeeyay ee Ogadenia iyo jaaliyaadka Soomaalida Ogadenia ee aduunka waxayna xubnuhu heleen warar badan oo ay tabayeen.
Kulanka oo ujeedadiisu ay ahayd abaabul ayaa gabi ahaanba lagu wareejiyay gudiga abaabulka ee heer Jabhadeed kuwaas oo maanta soo xaadiray kulanka faraca Midnimo waxayna gudigu khudbadahooda kubilaabeen warbixino dhaadheer.
Sidoo kale gudiga oo kakoobnaa 4 mas’uul ayaa xubnaha usoo gudbiyay salaan iyo fariin ay kawadeen madaxda sare ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, waxayna gudigu xubnaha usharaxeen howlaha cusub ee xubnaha uyaala iyo guud ahaan shaqooyinka loobaahan yahay.
Gudiga ayaa xubnaha usheegay in ay udiyaar garoobaan marxalada kala yaaca ah ee uu gumaysigu kusugan yahay, waxayna gudigu xuseen in rag iyo dumarba laga rabo waajibaadka saaran in ay gutaan.
Sidoo kale gudiga ayaa xubnaha kuwar galiyay in lagaadhay wakhtigii bulshada Soomaalida Ogadenia looga baahnaa in ay wax qabsadaan waxayna gudigu sheegeen in gumaysigii xaqeena haystay uu burburay isla markaana xubin kasta looga baahan yahay gudaha wadanka Ogadenia.
Sidoo kale xubnaha faraca Midnimo ayaa gudiga usheegay in ay qaadanayaan dhamaan amarada kasoo baxay hogaanka sare ee jabhada, waxayna xubnuhu sheegeen in aan mardambe ladumaali doonin oo xaqooda ay utaagan yihiin.
Gabagabadii kulankii maanta ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan iyo wajiyo qiiro leh waxaana kulanka suugaan halgameed kaga asqaysiiyay Abwaan Mukhtaar Sulub oo kamid ahaa gudiga abaabulka.